INTSHAYELELO: Ukuthwala ibhola yamanqatha enzonzobila: eyayisaziwa njengebhola yomqolo ongatshatanga, yeyona nto isetyenziswayo. Iimpawu zayo ukumelana zochuku ephantsi kunye nesantya esiphezulu. Xa kuthwalwa ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni ibhola enzulu emseleni ethweleyo? Ayizizo zonke iibheringi zebhola ezifanayo. Iindidi ezahlukeneyo zoyilo ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezithile, ke ukuba awuyonjineli okanye umboneleli (nokuba wenza ngamanye amaxesha), akusoloko ...Funda ngokugqithisileyo »
Zeziphi izinto ezichaphazela ukulunga?
Zeziphi izinto ezichaphazela ukulunga? Injongo yokuthwala kufanelekile kukukwenza iringi yangaphakathi okanye umsesane wangaphandle uzinze ngokuqinileyo nge-shaft okanye kwiqokobhe, ukuthintela i-axial engathandekiyo okanye ukujikeleza okusasazinge kwimatchin efanayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Amanqaku amane okuqwalaselwa kulungiso oluphezulu kunye nokugcinwa kwebhola ye-groove enzulu
Uyikhetha njani into efanelekileyo yokuthwala Kuqala, gcina i-bearing kunye nemo esingqongileyo icocekile andifuni ukukuxelela ukuba kuqhubeka ntoni. Nokuba uthuli olungabonakaliyo lungena kwi-HGF, luya kunxiba. Ukuyibeka kakuhle ...Funda ngokugqithisileyo »
Ungayikhetha njani into efanelekileyo yokuthwala Iimpawu zeebheringi ezinamathelisi e-Tapered roller ethweleyo luhlobo olwahlukileyo lokuthwala. Amakhonkco angaphakathi nangaphandle ebheringi anee-tapeways, kwaye izileyi ziyimbonakalo yekona ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni ukuba ngqongqo kokuthwala?
Yintoni ukuba ngqongqo kokuthwala? Ubungqindilili bokuthwala bubhekisa kubungakanani bamandla afunekayo ukuvelisa ukutshintsha kweyunithi. I-deformation ye-elastic yeebheringi ezihambayo incinci kakhulu, enokungahoywa ...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela yokuthambisa iibheringi zentsimbi engenasiphelo ngokuchanekileyo?
Indlela yokuthambisa iibheringi zentsimbi engenasiphelo ngokuchanekileyo? Abanye abantu banake kuphela ukufakela iibheringi zentsimbi engenasici. Nje ukuba bafakwe ngempumelelo, bahlala betyeshela ulondolozo lwamva. Ngapha koko, i l ...Funda ngokugqithisileyo »
Uyilungisa njani imisesane yangaphakathi neyangaphandle yeebheringi zeQYBZ
Uyilungisa njani imisesane yangaphakathi neyangaphandle yeebheringi ze-QYBZ Umsebenzi ophambili weebheringi ze-QYBZ kukuxhasa umzimba ojikelezayo ngomatshini, ukuqinisekisa indawo yokusebenza kunye nokuchaneka kweshafti kunye nezahlulo zothumelo kushafti, ...Funda ngokugqithisileyo »